लघुबीमा क–कसका लागि त ? – Insurance Khabar
लघुबीमा क–कसका लागि त ?
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७५, मंगलवार १७:५४
भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक जोखिमको न्यूनिकरण गर्ने एक प्रकारको सम्झौता बीमा हो । विमति र बमकीका बीच कानुनी प्रावधान पुव्याई गरिने एक प्रकारको विधि नै बीमा हो । बीमा गरिसकेपछि बिमितलाई भविष्यमा आई पर्ने आर्थिक तथा भौतिक क्षति सँग सामना गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ । बीमितले तिरेको बीमा शुल्क र बिमकको तर्फबाट कमिसन प्राप्त हुन्छ । यसरी प्राप्त भएको रकमले तपाईँ हामी जो कोहीलाई पनि भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा भोलिको दिनमा हुनसक्ने जोखिम अरूलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि अपनाइने एक औपचारिक वा कानुनी विधि लाई बीमा भनिन्छ ।
बीमा प्राय सबै मानिसहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्दछ । तर पनि कतिपय मानिसहरू आर्थिक क्षमताको कारणले गर्दा बीमालेखको पहुँच बाट टाढा रहन पुग्दछन् । त्यस्ता व्यक्ति जो न्यून आय, आर्थिक र सामाजिक कारण बाट हुन सक्ने जोखिम सँग सामना गर्न नसक्ने छन्, ती व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरूको जीवन वा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने बिमा नै लघु बीमा हो । लघुबीमा कार्यक्रम जो व्यक्ति अन्य बिमाको पहुँचमा छैनन् वा ऊसँग त्यो समर्थ छैन, त्यस्ता व्यक्तिका लागि बढी उपयुक्त हुन सक्छ । जसलाई पशुपालनको चिन्ता, औषधि उपचारको चिन्ता, व्यापार व्यवसायको चिन्ता, साथै बाबालिकाको भविष्यको चिन्ताले सधैँ पिरो लि रहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले लघुबीमाका विभिन्न कार्यक्रमहरू, जुन कार्यक्रमले आफूलाई सहजता प्रदान गर्दछ त्यस्ता कार्यक्रमहरू उपयोग गर्नुपर्दछ ।
लघुबीमा निर्देशिका २०७१ ले “लघुबीमा व्यवसाय” भन्नाले न्यून आय, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखिम उन्मुख वर्गका व्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरूको जीवन तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न यस निर्देशिका बमोजिम गरिने व्यवसाय सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ ।
लघुबीमाका विशेषता के हो त बुझ्नु जरुरी छ।
लघु बीमाको किसिम
– स्वास्थ्य लघुबीमा
–लघु व्यवसाय बिमा
– गम्भीर प्रकृतिका रोग बिमा